राज गणेश मन्दिर – हाम्राे गोरखा » राज गणेश मन्दिर
१९ जेष्ठ २०७८, बुधबार १२:३२
नेपाल सरकारको स्ववमित्व रहेको राज गणेश मन्दिर गोरखा जिल्लाको नगरपालिका वडा नं. १ पोखरीथोकमा रहेको छ ।
यो मन्दिर कसले कहिले बनाएको भन्ने बारे स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नभएपनि रामशाहको वि.सं. १६७१ को अभिलेखमा रामशाहले गणेश आदि देवताहरुको मठ मन्दिर बनाउनु भयो पन्तः २०४५ ऐ. भाग ३ पृष्ठ ६५३ भन्ने उल्लेख भएबाट र रामशाहको धार्मिक उपलब्धीको क्षेत्रमा बढी लगाव भएको देखिएको हुँदा यो मन्दिर पनि रामशाहबाट स्थापना भएको हुन सक्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।
राज गणेश मन्दिरको पनि महत्वपूर्ण विशेष रहिआएको छ । यस मन्दिर भित्र गणेशको कलात्मक मूर्ति छ । शिखर शैलीमा निर्मित यो मन्दिर पूर्वाभिमुख छ । मन्दिर १ तहको पेटीमाथि निर्माण गरिएको छ । मन्दिर निर्माणमा ढुङ्गा इटा सुर्कि चुनाको प्रयोग भएको छ । मन्दिरको छानामाथि गजुर छ । एकतले यस मन्दिरको छाना इट्टामाथि बज्र लेपन गरी बनाइएको छ ।
यस मन्दिरमा नित्य पूजा हुन्छ । अन्य विशेष पर्वहरुमा पनि यहु पूजा गरिन्छ । यहाँ मालपोत कार्यालय गोरखाबाट पूजारी नियुक्ती गरिन्छ । मालपोत कार्यालय गोरखाबाट नियुक्त हुने पूजारीले पूजाआजा सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्दछन् ।
अतः पुरानो रङ्गरोगन मेटिएकोले मन्दिरमा पुनः रङ्गरोगन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।